Tababare Pep Guardiola Oo Xili Ciyaareedka Cusub Ku Soo Shirtagi Doona Shaxda Koox Ku Qiimaysan £855 Milyan Iyo Xidigaha Lagu Soo Kordhinayo Kuwii Hore. - Gool24.Net
June 20, 2019 Mahamoud Batalaale
Manchester City kama caajisto in ay kooxdeeda horumar ku samayso mana jirto walwal ay ka qabto in ay lacag yaraani ku dhacdo sababtoo ah waxay haystaan maal qabeenada carbeed ee lagu xanto in lacagtii shidaalka ay ku khal khalinayaan suuqa kala iibsiga iyada iyo PSG.
Laakiin iyada oo aan wali UEFA go’an ka soo saarin ganaaxa la sheegay in Manchester City la dul dhigi doono waxay wali maamlka Etihad Stadium u muuqdaan kuwo aan dheg jalaq u siinayn UEFA iyo hanjabaadaha kaga imanaya.
Pep Guardiola ayaa xili ciyaareedka cusub la soo shirtagi kara shax kooxeed ku qiimaysan ilaa £855 milyan gini taas oo ah shax ku dhaw hal bilyan waana heer kale oo ay Man City ku shaqayn karto.
Wargayska The Sun ayaa soo bandhigay shaxda qiimaha waalida ah ku fadhida ee uu Guardiola xili ciyaareedka cusub ku shaqayn karo taas oo u suurtogalin karta in ay koobka premier league markii saddexaad oo xidhiidh ah ku guulaysan karaan.
Manchester City oo ku soo fashilantay Champions league ayay sidoo kale shaxdani caawin doontaa haddii ayna UEFA ka tuurin tartanka Champions league.
Shaxda uu hadda Guardiola ku soo qaaday koobka Premier league waxay ku qiimaysan tahay 469.5 milyan gini taas oo iyada lafteedu ahayd koox aad qaali u ah balse hadda qiimuhu laba jibaar ayuu noqon karaa.
Man City waxay diyaar u tahay in ay burburiso lacagta lagu iibsan karo heshiiska xidiga kooxda Atletico Madrid ee Rodri kaas oo ay lacagtiisu tahay £62.5 milyan gini waana xidig la barbar dhigo Sergio Busquets.
Man City ayaa sidoo kale doonaysa in ay rekoodhka suuqa kala iibsiga ee difaacyada u jabiso Harry Maguire oo 80 milyan gini ay kooxdiisa Leicester city ku qiimaysay.
Man City waxay ku dhawdahay heshiiska difaaca kooxda Juventus ee Joao Cancelo kaas oo difaaca midig ugu ciyaari kara qiimo 45 milyan gini ah.
sidaa daraadeed, haddii ay Man city labadan xidig la soo saxiixato waxa uu Guardiola heli doonaa shaxda koox labaad oo ku qiimaysan 385.9 mlyan gini.
Guud ahaan ciyaartoyda uu Guardiola xil ciyaareedka cusub kooxdiisa ku heli karo ayaa ku dhawaan doona hal bilyan gini waana lacag waali ku ah koox aanu hal mar garoonka ku soo wada gali karin.